सन्दीपका लागि कुन विशेष सिपिएल कि आइपिएल?
नेपाल लाइभ बुधबार, साउन १४, २०७७, १९:१७
काठमाडौं- सन्दीप लामिछाने क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सिपिएल) खेल्न बिहीबार वेस्ट इन्डिजतर्फ प्रस्थान गर्दैछन्। लामो प्रयासपछि कोरिया, अमेरिका हुँदै वेस्ट इन्डिज जान लागेका सन्दीप सिपिएल सकेर सम्भवत नेपाल फर्किने छैनन्।
वेस्ट इन्डिजबाटै इन्डियन प्रिमियर लिग खेल्न युएई प्रस्थान गर्ने सन्दिपको सम्भावना बढी छ। बुधबार सन्दीपले आफू सिपिएल खेल्न जान लागेको बारे पत्रकार सम्मेलन गरे। पत्रकार सम्मेलनमा सन्दीपलाई प्रश्न तेर्सियो ‘तपाई सिपिएल खेल्न उत्सुकता हुनुहुन्छ कि आइपिएल?’
सन्दीपले भने, ‘पहिले सिपिएलमा जाउँ। एकदमै उत्सुक छु। सिपिएलले मलाई रिदममा ल्याउने छ। म तयार छु तर यो भन्दा राम्रो रिदममा ल्याउनेछ। त्यसले गर्दा आइपिएलमा पनि राम्रो हुन्छ। अरु खेलमा पनि।’
सन्दीप सिपिएल खेल्न जाने टुंगो बुधबार मात्रै लागेको हो। कोरोनाको कारण अन्तर्राष्ट्रिय हावाई सेवा बन्द हुँदा सन्दीपले सिपिएल खेल्न जाने अन्यौल भएको थियो। तर परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतसँगको समन्वयनमा सन्दीप कोरियन एयरलाइन्सको चार्टरमा कोरिया जाने छन्। त्यसपछि टिकट काटेर उनी अमेरिका पुग्नेछन्। अमेरिकाबाट उनी अगस्ट १ तारिखमा वेस्ट इन्डिज पुग्ने छन्।
सिपिएल खेल्न जाने अन्यौल भएपछि चिन्ता ब्यक्त गर्दै म्यासेज पठाउँदै हौसला बढाई रहेका सबै समर्थकलाई सन्दीपले धन्यबाद समेत दिए। उनले भने, ‘जति पनि मेरा समर्थकहरु चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। म्यासेज गरिरहनु हुन्थ्यो उहाँहरु प्रति म निकै आभारी छु। आशा गर्छु यस्तो माया आगामी दिनहरुमा पनि पाहिरहुँ।’
सन्दीपले लकडाउनको समयमा पनि अभ्यास गरिहेकाले आफू पूर्णरुपमा तयार भएको पनि बताए। तर उनी वेस्ट इन्डिज पुगेर १४ दिनको क्वारेन्टाइन बस्नु पर्नेछ। त्यसपछि पुनः सन्दीपको कोरोना टेस्ट हुनेछ। सन्दीपले मंगलबार नेपालमै कोरोना परिक्षण गरेका थिए। जसमा उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो।
आफ्नो टिम जमैका तलावाज राम्रो भएको भन्दै आफूलाई कुनै दबाब रहेको पनि बताए। सन्दीपले भने, ‘खेल्दा अब दबाब चाहिँ हुँदैन। ३–४ वर्ष भइसक्यो। यो अवधिमा कुन खेलाडी कसरी खेल्छ राम्रोसँग थाहा छ। कसरी योजना बनाउने? के गर्ने भन्ने भइसकेपछि दबाब हुँदैन।’
सिपिएल अगस्ट १८ देखि सेप्टेम्बर १० सम्म आयोजना हुँदैछ। यसपछि सन्दीपले आइपिएल खेल्ने छन्। आइपिएल युएईमा हुँदैछ। अबको दिनमा सन्दीप निकै ब्यस्त हुने छन्। अन्तर्राष्ट्रिय घरेलु लिगमा ब्यस्त हुने सन्दीप नेपालको प्रतियोगिता पनि आइरहेको हुँदा उनको कार्यतालिका निकै ब्यस्त हुनेछ। यसबारे सन्दीप भन्छन्, ‘अबको ५–६ महिना निकै ब्यस्त हुने समय हो। किनभने आइपिएलदेखि बिग ब्यास लगायतका धेरै लिगहरु छन्। बिचमा नेपालको प्रतियोगिता पनि छ।’
कांग्रेसले बिराएको गणेशमान पथ
क्रिकेटर ललितको सफल शल्यक्रिया क्रिकेट खेलाडी संघ नेपाल (सिप्यान) ले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा मुख्य चोटको सफल शल्यक्रिया भएको जा... बिहीबार, असोज १, २०७७
न्युजिल्यान्डका बलिङ प्रशिक्षक जर्गेनसनको सम्झौता नवीकरण दुई वर्षे सम्झौता थप भएसँगै प्रशिक्षक जर्गेनसनले भनेका छन्, ‘न्युजिल्यान्ड क्रिकेटमा प्रशिक्षक यात्रामा मेरो यो अर्को उपलब्धि हो। मे... बिहीबार, असोज १, २०७७
म्याक्सवेल र एलेक्सको शतकमा अस्ट्रेलियालाई सिरिज इंग्ल्यान्डसँगको तीन खेलको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिज अस्ट्रेलियाले जितेको छ। तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा इंग्ल्यान्डलाई ३ व... बिहीबार, असोज १, २०७७
चितवनमा दुई कोरोना संक्रमितको मृत्यु शुक्रबार, असोज २, २०७७